Guddiga doorashooyinka oo baarlamaanka u gudbiyay waxyaabaha u qabsoomay | Newsomali
Guddiga doorashooyinka oo baarlamaanka u gudbiyay waxyaabaha u qabsoomay
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta su’aalo weydiiyay guddiga doorashooyinka dalka oo lagula xisaabtamayo waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo hadda.
Xaliimo Yareey, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka ayaa xildhibaanada baarlamaanka u bandhigtay waxyaabaha u qabsoomay, waxayna kaga jawaabtay su’aalaha ka yimid xildhibaanada.
Waxay sheegtay inay dadaal badan sameeyeen ayna sii wadi doonaan dadaalkooda ilaa ay ka dhaceyso doorashada dalka Soomaaliya sanadka 2021.
Xildhibaan Faarax Sheikh C/qaadir, oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in taageero maaliyadeed la siiyaa guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka, si ay shaqadooda u qabsadaan.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo xildhibaan Taaw oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyagana amaanay dadaalka guddiga doorashooyinka dalka, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in laga taageero dhaqaalaha, amaanka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay u gaaraan deegaanada maamul goboleedyada.
Ugu dambeyn guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka C/Welli Sheikh Ibraahim Muudeey ayaa sheegay inay sii wadi doonaan inay u yeeraan guddiga doorashooyinka si mar walbaa ay ula socdaan howlaha ay wadaan iyo halka ay marayaan.
Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa looga fadhiyaa inay ka shaqeeyaan sidii dalka Soomaaliya ay kaga dhici laheyd doorasho qof iyo codkiisa ah.